Maxaa laga yiri Guul-Daradii Xalay Barca kasoo gaartay Garoonka Sansiro? | GARSOORNEWS.COM – Fastest Independent Somali News Source	Stay Connected
Maxaa laga yiri Guul-Daradii Xalay Barca kasoo gaartay Garoonka Sansiro?
AC Milan ayaa xalay gagideeda cayaaraha ee Sansiro 2-0 ku dirtay kooxda Barcelona ee xilligan ugu wanaagsan adduunka.
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Prince Boateng iyo Sulley Muntari ayaa AC Milan siiyay guusha taariikhiga ah.
Haddaba macallimiinta iyo qaar ka tirsan cayaartoyda labada dhinac ayaa ka hadlay natiijada cayaarta.
Tababaraha koxda AC Milan, Massimiliano Alegri ayaa sheegay in kulanka uu rumaysnaa inay cayaartoydiisa ka badin karaan kooxda Barcelona.
Wuxuu sheegay in Barca ay u diideen inay khatar ku noqoto goolkooda.
“Si aan kulamada loo adkaado, waxaan u baahannahay in qof kasta oo huro wax kasta oo awooddiisa ah aadna loo dedaalo. Barcelona waxaan ka celinay agagaarka xerada ganaaxeenna, mana aysan helin xitaa hal laad oo goolka ku wajahnaa,” ayuu yiri Alegri
“Haddanatiijadan nooguma filna inaan gudubno, sidaas darteed waxaan rajaynaynaa inaan sidoo kalenatiijo fiican ka helno Camp Nou.” ayuu intaas sii raaciyay tababaraha 45-jirka ah.
Tababaraha ku-meel-gaarka ah ee Barcelona Jordi Roura ayaa muujiyay sida uu uga xumaaday guul-darrada uu kala kulmay kooxda Milan.
Roura oo warfidiyeenka la hadlayay cayaarta kaddib ayaa sheegay in natiijada ay ahayd mid xanuun badan.
“Natiijada waxay ahayd mid aan caadi ahayn, laba fursad oo kaliya ayay heleen [Milan]. Si wanaagsan bay isku difaaceen. Way nagu adkaan doontaa [Inaan gudubno]laakiin si buuxda ayaan ugu kalsoonnahay cayaartoydeenna iyo taageereyaasheenna.”
Sulley Muntari oo dhaliyay mid kamid ah goolasha labada ah ee ay Milan kaga adkaatay Barcelona ayaa sheegay in marka laga soo tago guusha taariikhiga ah ee ay ka heleen Barca uu ku faraxsan yahay inuu goolkiisii ugu horreeyay ka dhaliyo Champions League.
“Waxaan xaaskeyga u sheegayay in aan waligay koobka horyaallada Yurub aan ka dhalinin gool, maanta ayayna dhacday! Waanlayaabay xaqiiqdii, laakiin waan ku farxay guusha iyo goolkaba,”
“Waxaan u hoggaansannay tababaraheenna, shaqa wanaagsan buu qabtay. Anshax baannu garoonka ku muujinnay, dhinackastana waan xirnay. Barcelona waa koox dunida ka sarreysa, cayaartoy waxay haystaan cajiib ah, madka haddii aad xisaab la’aankula dheesho way ku dhibayaan.”
“Laba iyo eber way badan tahay, laakiin Camp Nou ma sahlana. Faa’iidadan waan haysannaa Inaan si wanaagsan samaynana waan isku dayi doonnaa.”
Xiddigga qadka dhexe ee Barcelona, Andres Iniesta ayaa muujiyay sida uu uga niyad jabay natiijada kulanka, wuxuuna qiray in kooxdiisa ay la’ayd dhamaystirka.
“Natiijadan waa min aad wanaagsanayn. Marka aad ka dhex muuqan wayso kulan, tani way dhici kartaa.” ayuu yiri Iniesta.
Weeraryahanka 18-jirka ah ee AC Milan M’Baye Niang oo gacan ka gaystay goolkii Muntari ee xalay ayaa sheegay inuu dareemayo in kooxdiisa ay ahayd inay goolasha badsato, balse wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay natiijada.
“Waa goolal wanaagsan. xitaa haddii aan fursado khasaarinay ma khasaarin doonno natiijadan marka aan ka hor tagno kooxda ugu wanaagsan adduunka [Barcelona].
“Laakiin marka aad Barca la cayaarayso, ma saadaalin kartid. Faa’iido wanaagsanbaan haysannaa, mar kale aan samayno sida aan samaynay.” ayuu Niang raaciyay.
Daafaca Barcelona Dani Alves ayaa dhaliilay qaadka ay kooxdiisa wax u soo bandhigtay kulanka.
“Waxay ahady inaan u cayaarno si ka wanaagsan sidii aan u cayaarnay,” ayuu Alves yiri.
“Champions League waa tartan wayn, si bilaash ah wax kuma heleysid, waa inaad u dagaallantaa.”
Wuxuu shaki galiyay sax ahaanshaha goolkii Boateng oo u muuqday inuu ku dhacay gacanta Zapata ka hor intii aanu shabaqa dhex dhigin xiddigga xulka Ghana.
“Aniga ahaan way caddeyd [inasan gool ahayn], laakiin garsooraha ma aanu arkin.”